သင့်မှာသာ အာမခံရှိမယ်ဆိုလျှင် ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
အောက်ပါတို့ကို သင့်အာမခံမှ အကုန်အကျခံပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား???
၁) အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
၃) အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြင်ပလူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူခြင်း
၆) အဖိုးအဖွားများနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ – ရေတိမ်ခွဲခြင်း၊ တင်ပဆုံရိုး အစားထိုးခြင်း
၇) သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ကုသခြင်း
ဒါပေမယ့် နဂိုရှိပြီးသား ရောဂါတွေအတွက်ကတော့ အာမခံမှတဆင့် အကုန်အကျခံပေးခြင်းမရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင်က ငယ်ရွယ်ပြီးကျန်းမာသေးတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးအား မိသားစုမျိုးရိုးရောဂါမှ ကာကွယ်လိုတယ်ဆိုရင်…. အခုက အာမခံဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ အာမခံထားဖို့ ပိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာရခြင်းမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရင်း သုံးခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါမကုသမီ ကြိုတင်၍ ကုန်ကျစရိတ်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသော်လည်း နောက်ဆုံးထွက်လာသော ငွေကြေးပမာဏက သင့်ကိုအံ့သြစေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်သည်တော်တော်များများက စင်ကာပူနိုင်ငံကို ကျန်းမာရေးအလိုအပ်ချက်အရ အမြဲတစေလာရောက်လေ့ရှိတာကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကလေးများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သူတို့ဟာ အာမခံထားခြင်းကို ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံထားခြင်းဟာ ငွေကြေးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် အပြင်းအထန်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျမှုနဲ့စာရင် ဒါဟာမပြောပလောက်ပါဘူး။
အာမခံသာရှိမယ်ဆိုရင် သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တောင် ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး
ဘဝမှာ တခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ အပေါ်မှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်း – ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၂၂ / ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၁၁